Recanto Mauá - Chalet Azaleia - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDelcionei
I-chalet itholakala ngaphakathi kwefama, kunye nobuninzi obuluhlaza, izilwanyana, njl., kumgama we-2.6 km ukusuka kumbindi we-Visconde de Mauá, kunye ne-650 m ukusuka kwi-asphalt. Sinendawo yokupaka iimoto ezi-4 phambi kwepropathi. I-chalet inemigangatho emi-2, exhunywe yi-staircase enqabileyo; phezulu kukho amagumbi amabini okulala. Igumbi lokulala elingaphambili linebalcony, elinombono okhethekileyo, kwaye ezantsi ligumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, ibalcony kunye nendawo yenkonzo ngasemva.
I-Azaleia chalet ine-65 m2, ifumaneka kwiplani ye-750 m2, apho kukho enye i-chalet efanayo. Umhlaba uphezulu, wonke ukwingca yamandongomane; inezitepsi kunye neerampu ezinokukhanya okukhokelela kwii chalets.
Ummandla waseVisconde de Mauá yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna ukushiya isiphithiphithi sesixeko, kunye neentlambo ezininzi kunye neengxangxasi kunye nemozulu entle yeentaba, yenza iindwendwe zihambe ziziva zihlaziyekile. Ubumelwane buzolile, kukho ezinye izindlu esitratweni, kodwa indawo ifaneleke kakhulu ukuphumla, ukuthula kuqhekezwe kukucula kweentaka.
I-chalet itholakala kwi-3km emva kweVila de Mauá, i-9km ukusuka eVila de Maringá kunye ne-12km ukusuka eVila de Maromba.
Umbuki zindwendwe ngu- Delcionei
Iindwendwe zinokuzenza zikhululeke kwipropathi kwaye ziqhagamshelane nomninimzi nangaliphi na ixesha ngeselfowuni okanye nge-whatsapp.